Ikhaya Lakho e-The Villages - I-Airbnb
Ikhaya Lakho e-The Villages
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Rocki And Tom
U-Rocki And Tom Ungumbungazi ovelele
Izwa Indlela Yokuphila Yedolobhana komunye wemiphakathi emikhulu kakhulu yabantu abathatha umhlalaphansi emhlabeni. Ikhaya lakho liphakathi kwezikwele zethu ezintathu zamadolobha, lapho uzothola khona ukuzijabulisa kwasebusuku, indawo yokudlela kanye nezitolo. Ukuqasha kwakho kubandakanya ukusetshenziswa kalula kwenqola yegalofu yegesi ye-Yamaha yango-2017 kanye namakhadi kamazisi wesivakashi akunikeza ukufinyelela ezikhungweni zethu zokungcebeleka. Izivakashi zanyanga zonke zingathenga amakhadi e-Resident ID ($50) afaka igalofu eliphezulu lamahhala.
Indlu yakho yokulala engu-2/2 yokugezela inepulani yaphansi evulekile ehlanganisa ikhishi, indawo yokudlela yasekuseni, igumbi lokuhlala kanye negumbi lokudlela. Kukhona futhi i-lanai enkulu ebonisiwe kanye nompheme ongemuva obheke i-Hemingway Pool kanye negceke elikhulu elingemuva, elibekwe izihlahla zesundu. Umgodi UKHIYIWE, futhi AYItholakali ukuthi usetshenziswe izihambeli.
I-HDTV engu-55" ene- I-Amazon Prime Video
Indlu yakho itholakala enkabeni yeThe Villages, ibanga nje elifushane ukuya kunoma yiziphi izikwele zethu ezintathu zamadolobha. I-pool yabantu abadala yizinyathelo nje ukusuka ku-lanai yakho. Zingaphezu kwamakhulu ayisithupha izimbobo zegalofu ezitholakalayo ukuze zidlalwe ezifundweni eziphezulu ezingu-36+ kanye nezifundo zobuqhawe ezingu-12. Amathuba ezemidlalo e-The Villages ahlanganisa yonke into kusukela ezicathulweni zamahhashi ukuya kumameshi e-Polo yamazwe ngamazwe, nakho konke okuphakathi. Amakhadi akho ezivakashi azokunikeza ukufinyelela kuyo yonke imisebenzi yokungcebeleka namakilabhu i-The Villages okufanele iwanikeze. Sicela uqaphele ukuthi izakhamuzi zendawo zezifunda zaseLake, Sumter kanye ne-Marion azifaneleki ukuthola amakhadi ezivakashi. Amakhadi okuhlala ayatholakala ngo-$50, uyawafuna.
Ibungazwe ngu-Rocki And Tom
Esikhathini esidlule, besiqasha i-Guest Suite ekhaya lethu. Nokho, ngenxa yobhubhane olukhona manje, asisahlali ekhaya uma sinezivakashi. Sisalelwe yihora kuphela futhi siyatholakala ukuze sinakekele noma yiziphi izimo eziphuthumayo ezingase zivele. Zizwe ukhululekile ukusithinta nge-Airbnb noma ngocingo.
Esikhathini esidlule, besiqasha i-Guest Suite ekhaya lethu. Nokho, ngenxa yobhubhane olukhona manje, asisahlali ekhaya uma sinezivakashi. Sisalelwe yihora kuphela futhi siyatholaka…
URocki And Tom Ungumbungazi ovelele